> Resource> Video> Olee weghara Videos si ihuenyo
US Internet ọrụ na-ele 13.5 ijeri online videos n'oge October, 2008, na-akanye a pasent 45 abawanye tụnyere otu afọ gara aga, dị ka ComScore Video Metrix. Nza nke YouTube ọrụ ndị nkọ na-eme video Nkuzi si ihuenyo kpọọ na-ekere òkè ha na YouTube. Ị maara otú weghara vidiyo si na ihuenyo na-eso ha na YouTube?
E nwere tumadi ụzọ atọ weghara vidiyo si na ihuenyo: a igwefoto ma ọ bụ camcorder, a VCR (Video Kaseti teepu), na video ihuenyo edekọ. Anyị ga-eme ka a mkpirikpi iwebata otú ha na-arụ ọrụ na Ndekọ videos nke kọmputa na ihuenyo.
1. igwefoto ma ọ bụ camcorder
Nke a bụ kensinammuo ụzọ na-eme video kpọọ site na kọmputa na ihuenyo. Nịm gị ndekọ igwe na a tripod, na-arụtụ ya na ihuenyo na ndekọ. Ọ dị mfe, ma àgwà nke dapụtara video ga-ajị ajị na blinking. Ọ pụrụ ịbụ na-enye aka iji nweta otu echiche nke ihe ị na-eme, ma ọ pụrụ isi ike ịhụ nkọwa na ihuenyo.
Ọ bụrụ na gị video kaadị nwere TV-esi mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ị nwere ike jikọọ ya ka a VCR na ndekọ na teepu. The video àgwà nwere ike mma ke akpa usoro. N'ihi na mkpebi na sharpness nke a telivishọn bụ ala karịa na kọmputa, na video ka ga na-ajị ajị na downgraded si mbụ oyiyi. Iji nweta a mma n'ihi mkpa ka ị ịgbanwe gị na ihuenyo mkpebi na-800 × 600 na kasị, ọkacha mma 640 × 480.
3. Video ihuenyo edekọ
Ọ na-arụ ọrụ dị ka a ndabere omume ma dekọọ ihe na-aga na gị na ihuenyo na n'ịwa video faịlụ. N'ihi bụ oké enweghị ọnwụ nke nkọwa na pụrụ ịbụ ụzọ kasị mma ike videos nke ihuenyo ọrụ. Ọ bụ ezie na dị iche iche ngwa nwere ike inyere gị ndekọ ihuenyo video, DemoCreator guzo ha. Site na iji ya, ị nwere ike na-emepụta software video Nkuzi na website demos dị nnọọ site atọ nzọụkwụ. Ebe a ka anyị hụ otú:
1 Mee elu na ndekọ nhọrọ ma dekọọ gị na ihuenyo
Họrọ Capture ebe na ndekọ mode. Malite gị na ndekọ na pịa F10 ịkwụsị ya mgbe gị na ndekọ bụ n'elu.
Mgbe gụchara na ndekọ, ị nwere ike ịga dezie ndekọ slides. E nwere music, akomako, annotations, ihe oyiyi, interactivities na ọbụna animations n'ihi na ị na welie gị ndekọ, si otú ahụ jiri demos ọzọ animated na mmekọrịta.
-Ebipụta video format-amasị gị. Nke a na ihuenyo edekọ enyere ọrụ na-ebipụta iche iche formats nke video dị ka SWF, AVI na exe maka mfe òkè. Ị nwere ike bulite Flash nkiri ka gị kpọrọ, ma ọ bụ bulite video ka video nkekọrịta saịtị dị ka YouTube, na-ekerịta video ngosi na onye ọ bụla!
Maka nkọwa, ị nwere ike ele nke a Guide Tutorial kere site ihuenyo edekọ DemoCreator. Pịa Full ihuenyo icon na play mmanya na-elele video na ihuenyo zuru oke.